निषेधाज्ञामा पनि नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण नरोकिने, अहिलेसम्म कति मिटर खनियो ? » aarthikplus
निषेधाज्ञामा पनि नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण नरोकिने, अहिलेसम्म कति मिटर खनियो ?
२०७८ बैशाख १९ गते, आईतवार १८:४० मा प्रकाशित
काठमाडौं । निषेधाज्ञामा नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण नरोकिने भएको छ । अत्यावश्यक बाहेक सबै कामहरु बन्द भए पनि सुरुङमार्गमा भने धमाधम काम भइरहेको सडक विभाग अन्तर्गत वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख रामहरी पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार आयोजनामा काम गर्ने व्यक्तिहरु पहिलेदेखि नै यहीँ कार्यरत रहेको र बाहिरी मान्छेसँग सम्पर्क नहुने हुनाले निरन्तर काम अघि बढ्नेछ । आवश्यक निर्माण सामग्री पनि उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
हालसम्म नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणमा १० प्रतिशत काम पूरा भएको उनले बताए । सुरुङमार्ग अन्तर्गत ४६९ मिटर सुरुङ खन्ने काम पूरा भइसकेको छ । कुल ५ हजार ४९७ मिटर सुरुङ मध्ये ४६९ मिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
मुख्य टनेल अन्तर्गत काठमाडौं (पूर्व) तर्फ ४९ मिटर टनेल खनिएको छ । धादिङ (पश्चिम) तर्फ ६५ मिटर मेन टनेल खन्ने काम सम्पन्न भएको पोखरेलले बताए ।
आपतकालीन उद्धार सुरुङ (स्केप्ट टनेल) तर्फ ११४ मिटर खन्ने काम पूरा भएको छ । उनका अनुसार १४ महिनाभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य सहित दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ । उनले दिन र रातमा गरेर ४//४ घण्टाको ओभरटाइम सहित सुरुङ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ उनले दुवैतर्फ २४ घण्टा काम भइरहेको बताए् । ‘निषेधाज्ञामा पनि काम निरन्तर हुने छ, २४ घण्टा काम भइरहेको छ, सक्दो समयमै सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ पोखरेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेशनले ४०० जनशक्ति खटाई २४ घण्टा काम गरिरहेका हो । कुनै दुर्घटना परे वा भवितव्य भए एम्बुलेन्स लगायतका आपतकालीन सवारीको आउजाउका लागि यस्तो सुरुङ (स्केप टनेल) प्रयोग हुनेछ । यो टनेल मूल सुरुङको एकतिहाई ब्यास (डायमिटर) को हुनेछ । अर्थात् मुख्य टनेल स्केप टनेलभन्दा तीन गुणा ठूलो हुनेछ ।
सुरुङसँगै पर्ने पृथ्वी राजमार्गको अहिले संचालनमा रहेको बाटो ओभर पास बनाएर संचालन हुन दिने र सुरुङमार्गबाट निस्कने बाटोलाई त्यसमुनि संचालन हुने गरी यस सुरुङमार्गको डिजाइन गरिएको छ ।
यो सुरुङमार्ग करिब २.७ किलोमिटर हुनेछ । काठमाडौतिरको पोर्टल चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ को टुटीपाखामा रहनेछ भने धादिङतिरको पोर्टल धुनिबेंसी नगरपालिकाको सिस्नेखोलामा रहने छ । टनेलमा मुख्य दुई वटा लेन हुनेछ । बीचमा थप एउटा सानो साइड लेन छ । सवारी साधन बिग्रिए साइड लगाउन उक्त लेन प्रयोग हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास भएको १६ महिना बितिसकेको छ  । ४४ महिनामा निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि विभिन्न समस्याहरूका कारण सुरुङ खन्ने काम ढिला शुरू भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यस सुरुङमार्गको मुख्य निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेशनले बनाएको तालिकाअनुसार आगामी १४ महिनामा सुरुङ छेडिनेछ । यो सुरुङमार्गको परामर्शदाता कम्पनी जापानको निप्पोन कोइ इजे र नेपाली कम्पनी एनसीसीको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) हो । यो जेभीले नै यस आयोजनाको डिजाइन गरेको हो भने आयोजना पूरा गर्दासम्म यसको सुपरीवेक्षणको काम पनि सोही कम्पनीले गर्नेछ